ကြော်ငြာစိတ်ပညာ: ခံစားချက်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွေးအခေါ်သည်သင်၏ကြော်ငြာခြင်းတုံ့ပြန်မှုနှုန်းအပေါ်သက်ရောက်မှု | Martech Zone
ပျမ်းမျှစားသုံးသူသည် ၂၄ နာရီတိုင်းတွင်ကြီးမားသောကြော်ငြာပမာဏနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များတွင်တစ်နေ့လျှင်ကြော်ငြာ ၅၀၀ ထိထိတွေ့ခဲ့သောပျမ်းမျှအရွယ်ရောက်ပြီးသူမှယနေ့တစ်နေ့လျှင်ကြော်ငြာ ၅၀၀၀ အထိသွားသည်။ ၎င်းသည်ပျမ်းမျှလူတစ် ဦး မြင်တွေ့ရသောတစ်နှစ်လျှင်ကြော်ငြာ ၂ သန်းခန့်ရှိသည်။ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရှာဖွေရေး၊ လူမှုမီဒီယာနှင့်ပုံနှိပ်ကြော်ငြာများပါဝင်သည်။ တကယ်တော့၊ ၅.၃ ထရီလီယံပြသထားတဲ့ကြော်ငြာတွေကိုနှစ်တိုင်းအွန်လိုင်းမှာပြနေတယ်။ ငါတို့ဟာကြော်ငြာတွေများလွန်းတာကြောင့်ကြော်ငြာရှင်တွေနဲ့စျေးသည်တွေကသူတို့ရဲ့ကြော်ငြာတွေကိုသေချာအောင်ဘယ်လိုလုပ်သလဲ။ စိတ်ပညာ.
ဂရိတ်ကြော်ငြာကကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ ကြော်ငြာကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုတုံ့ပြန်မှုသည်သုံးစွဲသူ၏ ၀ ယ်လိုသောဆန္ဒအပေါ်အမှန်တကယ်ကြော်ငြာအကြောင်းအရာထက်များစွာသာလွန်သည်။ ဂုဏ်ယူစရာ၊ ချစ်ခြင်း၊ ထူးခြားသောအောင်မြင်မှုများ၊ စာနာခြင်း၊ အထီးကျန်မှု၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု (သို့) အမှတ်တရများကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ကြော်ငြာ၏တုံ့ပြန်မှုနှုန်းကိုနှစ်ဆတိုးနိုင်သည်။
ကြော်ငြာတွင်ပါ ၀ င်သည့်အရာ၊ အသံ၊ အရောင်၊ အသံ၊ အရောင် ကြော်ငြာတစ်ခု၏သဘောထားအပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ဒီ infographic, Thinking vs. Feeling - တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ကဖန်တီးထားတဲ့ကြော်ငြာ၏စိတ်ပညာ အသုံးချစိတ်ပညာအွန်လိုင်းသိပ္ပံဘွဲ့ ပရိုဂရမ်သည်ကြော်ငြာကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသောတုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုဖျက်သည်။
Empathy တို့ဖြစ်ပါတယ် - ကြော်ငြာကလူတွေကိုမင်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ပိုနီးစေတယ်။
တီထွင်ဖန်တီးမှု - ကြော်ငြာတစ်ခုကလူကိုသင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်နှင့်ဂိမ်းရှေ့တွင်ခံစားရစေသည်။
သတင်းအချက်အလက်သည် Dove, Coca-Cola နှင့် Google မှစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ rollercoaster တွင်သုံးစွဲသူများအားအမှန်တကယ် ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ၏ဥပမာသုံးခုကိုလည်းဖော်ပြသည်။
Tags: adကြော်ငြာကြော်ငြာစိတ်ပညာကိုကာကိုလာအရောင်ချိုးငှက်စိတ်ခံစားမှုစာနာမှုခံစားချက်+ googleinfographicအသုံးချစိတ်ပညာအွန်လိုင်းသိပ္ပံဘွဲ့စိတ်ပညာအကြိုးသငျ့အကွောငျးသငျ့လျြောကနျသောစဉ်းစားအသံတောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ
GRM ပါဝင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်း